Sidee inay la midowdo nuqul Xiriirada on Samsung Galaxy qod6
Sidee inay la midowdo nuqul Xiriirada on Samsung Galaxy
Samsung Galaxy qod6 aad ogolaanaysaa xiriirada u hagaagsan ka xisaab, sida account Google. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar dhamaado ilaa aad Samsung Galaxy qod6 oo tus ka badan. Kuwani xiriirada nuqul kisi Muujiyo idin Murug badan, gaar ahaan marka aad leedahay si aad u hesho xiriir doonayo baxay boqolaal xiriiro. Waxaa laga yaabaa, waxaad sameyn kartaa gees u dhawr saacadood in ay dhex maraan dhammaan dadka ay khuseyso iyo tirtirto kuwa nuqul, laakiin waa run ahaantii shaqo daalin oo weyn.
Sidee inay la midowdo xiriirada nuqul on Samsung Galaxy qod6
Dhab ahaantii, in ay ku milmaan xiriirada nuqul on qod6, waxaad u tagi kartaa si xirfad leh qalab xisbiga saddexaad caawimaad. Halkan waa xuquuq mid magacaabay Wondershare MobileGo for Android (Windows). Waa desktop Tababaraha Android hal dukaan, taasoo ku siinaysaa fursad ah in ay ku milmaan xiriirada nuqul sida ay email ah, lambarka taleefanka iyo magacaaga si fudud aad.
Kuwa soo socda waa tutorial ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida in ay ka saarto xiriirada nuqul on Galaxy qod6. Download version maxkamad free of tababaraha desktop Android si ay u helaan diyaar.
Tallaabada 1. Isku aad Samsung qod6 via WiFi ama cable USB
Dadka isticmaala WiFi, waa in aad kala soo bixi app MobileGo aad Samsung qod6 ugu horeysay oo ay isticmaalaan telefoonka si lambarka sirta QR uu furmo suuqa shaashadda kombiyuutarka.
Haddii aad jeceshahay cable USB ah, kaliya aad u baahan tahay in aad furaysto in cable USB in kombiyuutarka ah.
No arrinta habka aad dooratid, tababaraha Android isla markiiba lagu ogaan doonaa Samsung Galaxy qod6 oo tus in uu furmo suuqa hoose sida shaashadda hoose.
Tallaabada 2. milmaan iyo tirtirto xiriirada nuqul ka Galaxy qod6
In galeeysid bidix, u tag guji Xiriirada inay soo galaan suuqa kala xiriir ah. On line ugu sareeya, ka heli guji De-nuqul . Tababaraha Android uu bilaabo inuu ogaado dhammaan xiriirada aad Samsung Galaxy qod6.
Markii uu dhamaystay, dhammaan xiriirada macluumaad nuqul la soo bandhigi doonaa. Sax koobi xiriir in aad rabto in aad ku milmaan ah, iyo dooran nooca darsanka ah. Markaas, guji midowdo soo xulay . Is ogow in aan barkinta aad Samsung Galaxy qod6 inta ay socoto laga guurayo.
Badan oo ku saabsan Wondershare MobileGo for Android ah
Ka sokow ku biirtay xiriirada nuqul on Galaxy qod6, dhan-in-mid Tababaraha this Android sidoo kale aad u ogolaanaysaa:
Ku dar iyo xiriirada edit info ka kombiyuutarka, sida horyaalka shaqo, cinwaanka guriga, cinwaanka email iyo magaca shirkadda,
Import & dhoofinta xiriir: xiriirada dejinta ka Outlook , Windows Live Mail, Windows Kitaabka Cinwaanka ama file vCard, iyo habka kale ee ku wareegsan,
Kombiyuutar dir oo aad hesho farriimo qoraal ah , si fudud u akhriyo, qoro oo soo diro fariimo qoraal ah oo ka kombiyuutarka mid ama ka badan oo qof;
Beddelaan audio iyo video: dejinta iyo beddelid kasta oo aynan audio iyo video files si kuwa saaxiibtinimo Samsung qod6;
Abaabulaan barnaamijyadooda Android : rakibi, uninstall, dhoofinta ama share barnaamijyadooda effortlessly;
Kaabta iyo soo celinta xogta: gurmad ama soo celin lahaayeen barnaamijyadooda, xiriirada, jadwalka fariimaha, qoraal iyo in ka badan.
> Resource > Samsung > Sidee inay la midowdo Xiriirada nuqul on Samsung Galaxy S3